Ungasusa Kanjani Izinwele Zobuso unomphela - Izinwele
Ungasusa Kanjani Izinwele Zobuso unomphela
1. Kuyini iHirsutism? Uziqeda kanjani lezi zinwele zobuso ezeqile?
ezimbili. Yiziphi Izimbangela Zokukhula Kwezinwele Zobuso Okweqile?
3. Ngabe Ukubhekana Nesimo Sezokwelapha Esibangela Ukukhula Kwezinwele Okweqile Isinyathelo Sokuqala Sokususa Izinwele Zobuso Ngonaphakade?
Isine. Ingabe Izindlela Zokusiza Ekhaya ze-DIY Zingaqeda Izinwele Zobuso Ngonaphakade?
5. Ngabe i-Electrolysis ingasiza Ekuqedeni Ubuso unomphela?
6. Ngabe ukususwa kwezinwele ze-laser kungasiza ekuqedeni izinwele zobuso?
7. Ngabe Ukuxhibilika Ebusweni Kuyindlela Yokususa Izinwele Zobuso?
8. Ama-FAQ: Ungaziqeda Kanjani Izinwele Zobuso unomphela
Ungahle ugcine uhlobo oluqinile lobuhle, kepha kukhona into eyodwa enqaba ukulawulwa. Sikhuluma ngezinwele zobuso ezingadingeki. Kwesinye isikhathi sihlushwa ukukhula okweqile futhi sizithola singazi ukuthi singaziqeda kanjani izinwele zobuso (ezivame ukuba mnyama futhi ezimnyama) unomphela. Akudingeki ukuthi kushiwo, izinwele zobuso zingathatha imiphumela ekhombisa imizwa ekhombisa ukuthi abesifazane abahlushwa izinwele zobuso ngokweqile bavame ukubika amazinga okhathazeka emitholampilo. Ucwaningo lwango-2006, olwenziwa e-UK, lukhombisa ukuthi ngokwesilinganiso, abesifazane abanezinwele ebusweni bachitha isikhathi esingaphezu kweyodwa nohhafu ngesonto bezama ukuphatha le nkinga. Ngakho-ke, yiziphi izindlela ezilula neziphumelelayo ze- kanjani ukususa izinwele zobuso unomphela ? Nakhu ukwehla.
Izinto zokuqala kuqala udinga ukwazi ukuthi i-hirsutism ifaka ini. I-Hirsutism ayilutho ngaphandle kokukhula kwezinwele ngokweqile ebusweni bakho noma kwezinye izingxenye zomzimba wakho. Ngokuvamile, kuthinta ucwaningo lwabesifazane kukhombisa ukuthi oyedwa kwabesifazane abangu-14 une-hirsutism. Ungaba ne-hirsutism eyeqile uma ukukhula kwezinwele kukhulu futhi kumnyama, futhi akulungile futhi kuzacile. Kwesinye isikhathi, izimpawu ezihambisanayo ze-hirsutism zingabandakanya ukuya esikhathini okungahambi kahle, isikhumba esinamafutha nezinduna. Isinyathelo sokuqala sokubhekana ne-hirsutism ukubonisana nodokotela ongakucela ukuthi wenze izivivinyo eziningi zezokwelapha ukuze uhlole ukuthi yini ebangela i-hirsutism kuqala. Ukwazi izinga le-hirsutism kuzokusiza uhlele ukuthi ungazisusa kanjani izinwele zobuso unomphela.
Ithiphu: Xhumana nodokotela ukuze wazi izinga le-hirsutism ophethwe yilo.
2. Ziyini Izimbangela Zokukhula Kwezinwele Zobuso Okweqile?
Ngokuvamile, i-hirsutism ibangelwa insalela yamahomoni wesilisa abizwa ngokuthi ama-androgens. Ukungalingani kwehomoni kuvame ukusolwa ngalolu hlobo lokukhula kwezinwele. Ezinye izimbangela zibandakanya i-congenital adrenal hyperplasia (isimo sezempilo esizalwa nefa esithinta izindlala ze-adrenal), ukukhuluphala ngokweqile noma ukuzuza ngokushesha kwesisindo nokudla ama-anabolic steroids ajwayele ukudliwa ngabantu abafuna ukwakha imisipha. Kodwa i-PCOS (i-polycystic ovary syndrome) kuthiwa iyimbangela evame kakhulu yokukhula kwezinwele ngokweqile ebusweni bakho noma kwezinye izingxenye zomzimba wakho.
Ithiphu: Ngaphambi kokukhetha noma yikuphi okunwetshiwe ukwelashwa ngokumelene nezinwele zobuso , yazi ukuthi yini ekulethela inkinga. Lokho kungakusiza ekubekeni isu le- ukususa izinwele zobuso unomphela .
ukumisa kanjani ukuwa kwezinwele kwabesifazane
3. Ngabe Ukubhekana Nesimo Sezokwelapha Esibangela Ukukhula Kwezinwele Okweqile Isinyathelo Sokuqala Sokususa Izinwele Zobuso unomphela?
Uma unesimo sezokwelapha esiholela ekukhuleni kwezinwele ngokweqile, kufanele wenze yonke imizamo yokuthwala lesi sifo kuqala. Ucwaningo lukhombisa ukuthi ama-PCOS enza cishe amaphesenti angama-72 kuya kwangama-82 wamacala okhula ngokweqile kwezinwele. Ngakho-ke, uma utholwe une-PCOS, kufanele ubhekane nenkinga lapho kulwiwa khona. Kunezindlela eziningana isimo sezokwelapha esingabhekwa. Uma ukhuluphele ngokweqile futhi utholakale une-PCOS, ukwehlisa isisindo ngokusebenzisa indlela yokuphila enempilo kungasiza ukwenza umjikelezo wakho wokuya esikhathini ujwayelekile. Ochwepheshe bathi ukwehlisa isisindo kunciphisa amazinga akho e-insulin, okuholela emazingeni aphansi e-testosterone, nawo angagcini nje ngokuthuthukisa ukuzala kepha anciphise nezimpawu ezibonakalayo njengokukhula ngokweqile kwezinwele nomqubuko.
Amaphilisi wokukhulelwa ngomlomo anqunyelwe kabanzi i-PCOS. Ngaphandle kwalokhu, imithi yehomoni yokwehlisa i-testosterone nokukhuthaza ukukhiqizwa kwamaqanda kanye nezidakamizwa, njenge-metformin, ukwelapha isifo sikashukela nakho kunqunyiwe. Ukuhlinzwa ukususa ama-cysts amakhulu nokubhubhisa izicubu ezikhiqiza i-androgens kuvame ukubhekwa njengenketho yokugcina.
Ithiphu: Ukuzivocavoca umzimba, udle okunempilo futhi ulwe nokukhuluphala ukulawula izinkinga ze-PCOS.
4. Ngabe Izixazululo Zasekhaya Ezi-DIY Zingaqeda Izinwele Zobuso Ngonaphakade?
Kungenziwa ngaphandle kokuthi une-hirsutism eyeqile. Esikhundleni sezinyathelo zamakhemikhali ezinzima ngokumelene nezinwele zobuso, lezi khambi ezilula kodwa eziphumelelayo zingakusiza susa unwele lobuso unomphela :
Isigaxa sefulawa seChickpea
Endishini, hlanganisa uhhafu wenkomishi yempuphu ye-chickpea, u-2 tsp we-turmeric powder, uhhafu we-tsp kakhilimu omusha nengxenye yenkomishi yobisi ukuze wakhe unama. Faka isicelo endaweni lapho ukukhula kwezinwele kubonakala kahle bese ulinda imizuzu engama-20-30. Hlikihla ngobumnene ohlangothini oluhlukile lokukhula kwezinwele bese ugeza ngamanzi afudumele. Ukuze uthole imiphumela emihle, sebenzisa leli phakethe okungenani kabili ngeviki.
ukuzivocavoca ukunciphisa amafutha esisu ngesonto
I-Papaya ne-turmeric mask
Endishini, hlanganisa u-2 tbsp we-papaya unamathisele, ½ tsp we-turmeric powder ne-5 tbsp ye-aloe vera gel ukwakha unama. Faka unamathisele endaweni ekhombisa ukukhula kwezinwele okungafuneki. Yiyeke imizuzu engu-20 ize yomile. Susa lokhu ngokuzihlikihla kolunye uhlangothi lokukhula kwezinwele.
Ufulawa we-gram namanzi asukume
Thatha u-3 tbsp kafulawa oluhlaza wegramu, isipuni esisodwa samanzi ama-rose ne-tsp eyodwa yejusi likalamula uwahlanganise kahle endishini. Faka isicelo ezindaweni lapho ukukhula kwezinwele kubonakala kakhulu. Linda imizuzu engama-30 noma kunjalo noma ize yomile ngokuphelele. Gcoba imaski ngokunyakaza okuyindilinga.
Uju lukalamula mask
Hlanganisa ijusi likalamula ophelele kuhafu wezipuni zoju ukuze wakhe unamathisela obushelelezi. Faka ingxube endaweni ethintekile bese uyiyeka imizuzu engama-20-25. Lokhu kuzosiza ukukhanyisa izinwele ezingafuneki njengoba ulamula unezinto zokufaka amakhorali.
Ubhanana ne-oatmeal scrub
Hlanganisa ubhanana owodwa ocubuziwe namathisipuni amathathu we-oatmeal esitsheni. Imasaje ebusweni bakho imizuzu eyi-15-20 ngeminyakazo eyindilinga bese uyigeza ngamanzi. Ukuze uthole imiphumela emihle, sebenzisa imaski kabili ngesonto.
Ufulawa welayisi, i-turmeric nobisi
Thatha u-3 tbsp kafulawa welayisi, isipuni esisodwa se-turmeric powder no-2 tbsp wobisi. Hlanganisa zonke izithako ndawonye. Faka amanzi, uma kunesidingo. Faka le maski ezindaweni ezithintekile bese ulinda imizuzu engama-30. Uma seyome ngokuphelele, geza ngamanzi afudumele.
Amanzi eRose, amafutha omnqumo ne-alum
Thatha i-alum encane, isipuni esisodwa samanzi ama-rose ne-isipuni esisodwa samafutha omnqumo. Hlanganisa konke - qiniseka ukuthi i-alum (iyiguqule ibe yimpuphu) iyancibilika emanzini ama-rose. Faka isicelo ezindaweni ezithintekile nebhola likakotini. Linda lize lome ngokuphelele. Faka olunye ungqimba ulinde lome. Phinda lokhu izikhathi eziyisithupha. Geza futhi unike isikhumba amanzi ngesithambisi noma ngamaconsi ambalwa kawoyela womnqumo.
Isigaxa sefulawa leqanda nommbila
Hlanganisa i-2 tsp kashukela ne-tsp eyodwa ye-cornflour neqanda elilodwa ukuze wakhe unamathisela obukhulu. Yigcobe ebusweni bese uyishiya yomile imizuzu eyi-15-20. Yikhiphe ngobumnene uma isomile, bese uyiphinda kathathu ngesonto ukuthola imiphumela ephezulu.
Ibhali nobisi lokukhuhla
Hlanganisa u-2 tbsp we-powder yebhali ne-tbsp eyodwa yobisi nejusi likalamula ngamunye ukuze wenze unama. Faka isicelo ebusweni bakho, bese usoma ngokwemvelo imizuzu engama-20. Geza ngamanzi afudumele.
Thatha u-2 tbsp we-gelatin powder ongathandeki, u-4 tbsp wobisi namaconsi ambalwa kalamula kalamula. Hlanganisa konke bese ushisa ingxube cishe imizuzwana engama-30. Vumela ingxube ipholile futhi ifake ebusweni. Linda imizuzu eyi-10 bese uyihluba. Ungazami le maski uma unesikhumba esibucayi.
Amafutha e-lavender kanye namafutha esihlahla setiye
Kukholwe noma ungakukholwa, ukuhlanganiswa kwamafutha abalulekile kungasebenza njengesifihla-buso sokulwa nobuso. Thatha u-2 tsp kawoyela we-lavender namaconsi ayi-8 kawoyela wetiye uhlanganise kahle endishini encane. Faka isicelo kabili ngosuku ngebhola likakotini. Lawa mafutha abalulekile enza ngokumelene ne-androgens futhi angavimbela ukukhula kwezinwele.
Ama-lentile, amazambane noju
Udinga uhhafu wenkomishi yamalenti aphuzi, amazambane, amaconsi ambalwa kalamula kalamula kanye no-tsp owodwa woju. Cwilisa udali ubusuku bonke bese uwuguqula ube unamahloni obukhulu ekuseni. Ngemuva kokuxebula amazambane, sebenzisa iprosesa ukukhipha ijusi kuyo. Hlanganisa unama lentil kanye namanzi amazambane ndawonye. Faka ijusi kalamula noju. Faka isicelo ezindaweni ezithintekile bese ulinda cishe isigamu sehora. Lapho imaski isome ngokuphelele, yigcobe ngeminwe yakho.
amakhambi asekhaya okuqinisa izinwele
Ithiphu: Zama ukusebenzisa noma yimaphi lawa maski ukususa izinwele ebusweni okungenani kanye ngesonto.
I-Electrolysis iyindlela ethandwayo yokususa izinwele zobuso unomphela. Ngokuyinhloko, ngesikhathi se-electrolysis, kufakwa idivaysi ye-epilator esikhunjeni futhi kufakwa amaza omsakazo ama-shortwave ukulimaza izintambo zezinwele nokuvimbela izinwele ezintsha ukuba zingakhuli. Awungeke uthole inzuzo yesikhathi eside yokususa izinwele ku-electrolysis ngokuhlala kanye nje uzodinga ukulandela okulandelayo ukuqeda izinwele zobuso unomphela. Kepha uma unesineke, nemali yokuqalisa, i-electrolysis ingakunika imiphumela oyifunayo, ngokusho kochwepheshe. Ngaphezu kwalokho, inqubo ephansi yokugcinwa.
ungasusa kanjani izinwele esilevini ngokwemvelo
Kepha ungayi ku-electrolysis ngaphandle kokubonisana nochwepheshe ofanele. Udinga udokotela wesikhumba oqinisekisiwe wale nqubo. Uma kusetshenziswa izinaliti ezingavulwanga, le nqubo ingaholela ezifweni ezinzima.
Ithiphu: Kudingeka udokotela wesikhumba oqinisekisiwe we-electrolysis.
Ukususwa kwezinwele zeLaser kungenye indlela ethandwayo yokususa izinwele zobuso unomphela. Kodwa-ke, kubalulekile ukuqonda umthelela ogcwele wokususwa kwezinwele ze-laser ngaphambi kokukhetha. Ngokuyisisekelo, ukususwa kwezinwele ze-laser kufaka ukuthunyelwa kwemisebe emincane ngosizo lwama-lasers aphezulu wokushisa. Umgomo oyisisekelo ngukuthi, izinwele zezinwele zidinga ukonakala ukuze zivimbele ukukhula kwezinwele unomphela. Futhi, lokhu kudinga ukulandelwa okuningi ukuthola izinzuzo zesikhathi eside. Futhi, kungaba inqubo ebiza kakhulu. Okwesithathu, udinga uhlobo olunzulu lokunakekelwa ngemuva kokunakekelwa. Isibonelo, ngeke kube khona ukuzivocavoca umzimba, izimonyo, ama-spas noma ama-sauna wakho emva kokwelapha i-laser. Uzodinga futhi ukusebenzisa imikhiqizo ethile enconywe ngudokotela wesikhumba odinga ukuyigwema yokukhuhla, i-glycolic acid nama-retinol okhilimu. Okunye ukuqaphela: I-Laser akuyona iphesenti eli-100 unomphela, izinwele zingaphinde zivele ngemuva kwesikhathi esithile.
7. Ngabe Ukukhalaza Ubuso Kuyindlela Yokususa Izinwele Zobuso?
Ungacelwa futhi ukuthi ucabangele ukugcotshwa kobuso ebusweni njengoba owokugcina engasisiphula izinwele ezimpandeni zawo. Uma unekhono, ungakwenza lokhu ekhaya, kepha kuvame ukwenziwa njengenqubo ye-salon. Kuyabiza futhi, ngokungafani namasu okususa izinwele unomphela, futhi kulula njengoba amaqembu ezinwele esuswa ngasikhathi sinye. Futhi, ngokuhamba kwesikhathi, ukuqoshwa kwe-wax kungafinyelela ekususweni kwezinwele unomphela uma i-follicle iba buthaka ngokwanele. I-wax ethambile (evunyelwe ukusetshenziswa kwezimonyo) isetshenziswa ngaphezu kwendawo oyifunayo ngento efana nommese we-spatula noma ibhotela. Kusetshenziswa indwangu noma indwangu yamaphepha phezu kwalokhu, bese icindezelwa ngokuqinile esikhunjeni. Ngemuva kwalokho umucu ususwa ngokushesha ukhombise ukukhula kwezinwele. Kulezi zinsuku, i-wax eqinile iyatholakala, lapho i-wax ingakhishwa khona ngaphandle kokusebenzisa indwangu. Kungaba khona ukwehla okuthile kepha. Okokuqala, ukugcwala i-wax ngokuvamile kungaholela emaphepheni anegazi esikhunjeni. Kungaba khona ukucasuka kwesikhumba, ukushintsha kombala kanye nokunye ukuphendula okweqile. Njengoba kufanele uyiphinde inqubo, ubuhlungu bungaba yinto ehlala njalo.
Ithiphu: Gwema ngokuqinile ukugcotshwa ebusweni, uma unesikhumba esibucayi.
Ama-FAQ: Ungaziqeda Kanjani Izinwele Zobuso unomphela
Q: Yini inkomba yeFerriman-Gallwey? Kuhlobene kanjani nokususa izinwele zobuso?
KUYA: Ukukubeka kalula, kuyinkomba lapho kubalwa khona izinga le-hirsutism noma ukukhula kwezinwele zomzimba wesilisa kwabesifazane. Kwakhiwa ngo-1961, inkomba yokuqala yabheka izindawo zomzimba eziyi-11 kwabesifazane, zilinganise izinwele zisuka ku-zero (azikho izinwele) ziye kwezine (izinwele ezibanzi). Lesi sikali senziwa lula kamuva. Ngokuyinhloko, inkomba manje inezithombe zokusatshalaliswa kwezinwele ezindaweni ezinjengobuso, isifuba, isisu, izingalo nemilenze. Amaphuzu ayisishiyagalombili kuya kwayi-15 akhombisa okujwayelekile kuya ku-hirsutism emnene ngenkathi amaphuzu angaphezu kuka-15 akhombisa ukukhula ngokweqile kwezinwele.
Q: Ingabe i-hirsutism noma ukukhula ngokweqile kwezinwele ebusweni kungakhombisa i-PCOS?
KUYA: Uphawu olubonakalayo njenge-hirsutism empeleni lwenza kube lula kakhulu ukuthola i-PCOS. Uma uchitha isikhathi esiningi ku-waxing, threading and plucking, futhi uma isikhumba esilevini sakho sizizwa sibuhlungu ngaso sonke isikhathi, kungenzeka ukuthi ungayinaki inkinga esemqoka ye-PCOS. Ukwelashwa kwe-PCOS kanye nokwelashwa kwe-laser kunganciphisa ukukhula kwezinwele kakhulu. Lo mzamo ohlanganisiwe ungakusiza ukuthi ususe unwele lobuso unomphela.
ungasusa kanjani amabala ngokushesha
isisombululo esihle kakhulu sokulahleka kwezinwele
ukusika izinwele okusha kwamantombazane
amakhambi asekhaya okulawulwa kwezinwele nokukhula
ukususwa kwezinwele okungafuneki ekhambi lasekhaya lobuso
izinwele zilawulwa kanjani